Wasaaradda Maaliyada Puntland oo lacag been abuur ah ku gubtay Boosaaso - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandWasaaradda Maaliyada Puntland oo lacag been abuur ah ku gubtay Boosaaso
October 12, 2017 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Lacagta la gubay ayaa ahayd 600,500,000. [Xigashada Sawirka: Puntland Post]
Boosaaso-(Puntland Mirror) Wasaaradda Maaliyada Dowladda Puntland ayaa maanta oo Khamiis ah magaalada Boosaaso ku gubtay lacag Shillin Soomaali ah oo been abuur ah.
Lacagta ayaa tiradeeda saraakiisha Wasaaradda ku sheegeen 600,500,000 (lix malyan iyo shan boqol oo kun).
Lacagta ayaa waxaa qabtay laamaha ammaanka gobolka Bari iyadoo la doonayay in la gasho gudaha magaalada Boosaaso, ee xarunta ganacsiga Puntland.
Puntland ayaa horey uga digtay lacagaha been abuurka ah in ay soo galaan gudaha Puntland kuwaasoo suuqyada ku keeni kara sicir barar.
Bilihii lasoo dhaafay, gobolada Puntland ayaa waxaa saameeyay sicir barar ka dhashay diidmada lacagta cooshka ah ee Shillin Soomaaliga balse xaalada ayaa u muuqata mid soo hagaagaysa hadda.
Maamul goboleedyada Soomaaliya oo sameystay gole iskaashi, guddoomiyana u doortay madaxweynaha Puntland
Galkayo-(Puntland Mirror) Around 50,000 people have been displaced from the town of Galkayo after heavy fighting erupted last week between the forces of Puntland and Galmudug, the United Nations said on Friday. “Humanitarian partners estimate [...]
New York-(Puntland Mirror) Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa walaac ka muujiyay dagaaladii dhawaan ka dhacay gobolka Sool oo u dhaxeeyay ciidamada Puntland iyo Somaliland, waxayna soo jeediyeen in la joojiyo. “Golaha Ammaanka waxa uu [...]